gqom – The Ulwazi Programme
Umdanso ekuthiwa iGqom sesike sabhala ngawo, njengohlobo lomculo nomdanso olushisa izikhotha eNingizimu Afrika , owaqala emalokishini aseThekwini nasesifundazweni saseMpumalanga Kapa. Lapha sifake i-video yebhungu laseThekwini idansela umculo weGqom, yenza iVosho, umdanso odume kakhulu eNtsheni yaseNingizimu Afrika. Awuke uzibukele. Article overview The article is about one of the most popular street dance styles in South African … Read more
Categories Culture, Music Tags gqom, ilokishi, Umculo, Umdanso, vosho
I-Gqom uhlobo lomculo nolomdanso olushisa izikhotha eNingizimu Afrika yonke. Ngokubika kwabomlando, i-Gqom yaqumbuka emalokishini aseThekwini nasesifundazweni saseMpumalanga Kapa. Igqom iwuhlobo lwe-house music onesigqi esisheshayo. Igama elithi ‘igqomu’ lidala eThekwini – kanti lwaziwa njengegama elichaza ingoma emnandi yokuzijabulisa. Leli gama-ke lisanda kuduma kwezinye izinhlanga zaseNingizimu Afrika, emva kokusebenza kanzima kwabantu abasemukhakheni wezomculo ekwenzeni iGqom idume izwe … Read more
Categories Culture Tags dance, gqom, Music, Umculo, Umdanso